सेल्टल्ट सहायक मुद्दाहरू शीर्ष5वेब स्क्रैपर्समा प्रदान गर्दछ
अक्सर, हामी आवश्यक जानकारी साइट मा फंसिएको छ, र हामी स्क्रैप गर्न वा यसलाई ठीकसँग क्रल गर्न सकिँदैन। जबकि केहि साइटहरू सफा र संरचित ढाँचामा डाटा प्रस्तुत गर्न प्रयास गर्दछ, अरूले कुनै वेब क्रलिङ वा डेटा स्क्रैपिंग सुविधा प्रदान गर्न सक्दैनन्। यसैले हामीले सर्वोत्तम वेब क्रलरहरू, खनिजहरू र स्क्रैपर्सहरू पहुँच गर्न आवश्यक छ। यहाँ हामीले यस सन्दर्भमा शीर्ष पाँच उपकरणहरू छलफल गरेका छौं।
Webhose.io ले अनलाइन स्रोत र साइटहरूबाट वास्तविक-समय डेटा प्राप्त गर्न सक्षम बनाउँछ। सबैभन्दा राम्रो भाग यो प्रोग्राम खनन र साइटहरू सजिलैसँग क्रल गर्दछ र सफा र राम्ररी व्यवस्थित ढाँचामा डेटा प्रस्तुत गर्दछ। यसले हामीलाई हामीलाई सक्षम बनाउँछ कि उनीहरूको खोजशब्द, वाक्यांशहरू, भाषाहरू र प्रकृतिको आधारमा डाटा स्क्रैप गर्न। अन्तिम परिणामहरू XML, RSS र JSON फाइलहरूको रूपमा प्राप्त गर्न सकिन्छ। यद्यपि यो कार्यक्रम लागतको नि: शुल्क छ, यदि तपाईं व्यवसायिक प्रयोजनका लागि Webhose - dominios florida registrar.io प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ भने यसको प्रीमियम संस्करण पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ। भुक्तान गरिएको योजनाले तपाईंलाई मुख्य सर्भरमा धेरै HTTP अनुरोधहरू पठाउन सक्षम गर्नेछ, यो तपाइँलाई स्क्रैप गर्न र साइटहरू क्रल गर्न सजिलो बनाउनेछ।
स्क्रैप इन्टरनेटमा शक्तिशाली र अचम्मलाग्दो स्क्रैपिंग र क्रलाङ ढाँचा हो। यसको सबैभन्दा राम्रो भाग यो कार्यक्रम हो जसले विशेषज्ञहरूको समुदायद्वारा समर्थन गर्दछ, जसको साथ तपाइँ उपयोगी सुझावहरूको लागि सम्पर्कमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो कुनै पनि समयमा, कहीं पनि। यो स्क्रैप र तपाईंको डेटा को पार्स गर्न मद्दत गर्दछ र यसलाई फरक फरक ढाँचाहरूमा CSV र JSON जस्ता बचत गर्दछ।
3. आउटराइट हब:
यदि तपाईं कोडहरूसँग सहज छैन भने, आउटलुक हब तपाईंलाई उपयोगी भिजुअल इन्टरफेस प्रदान गर्नेछ, यो तपाइँलाई क्रल गर्न र डाटा मेरो सजिलो बनाउनेछ। यसको होस्ट संस्करण आधिकारिक साइटमा उपलब्ध छ, र नि: शुल्क संस्करण कुनै पनि अनलाइन भण्डारबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ। Outwit Hub फायरफक्स एक्सटेन्सन हो। जसले तपाइँलाई प्रोग्रामिङ क्षमताहरू लिन आवश्यक छैन।
आउटराइट हब जस्तै, अक्टोपारे एक शक्तिशाली वेब स्क्रेपर, क्रलर र डेटा खनिज हो। गतिशील साइटहरू जाभास्क्रिप्ट, कुकीजहरू, रिडिरेक्ट्सहरू, र AJAX प्रयोग गर्दै। यो वेब प्रोग्रामले कुनै पनि साइट वा ब्लुटुथ हटाउन मद्दत गर्नेछ ओग र डाटाको आधारभूत र उन्नत प्रकारहरू निकाल्नेछ। तपाईलाई आवश्यक सबै महत्त्वपूर्ण जानकारी अक्टोपारे 'क्लाउड भण्डारण क्षेत्रमा स्थापना गर्न सकिन्छ। यसले तपाईंलाई एक घण्टा भित्र बल्क वेबसाइटहरू निकाल्न सक्षम बनाउँछ, र तपाईं अक्टोपारे एपीआईसँग उत्तम गुणस्तर पाउनुहुनेछ। मलाई यहाँ भनौं कि यो फ्रीवेयर केवल विन्डोजको लागि सहयोगी छ र कुनै पनि अपरेटिङ सिस्टमको लागि उपलब्ध छैन।
5. Chrome को लागी वेब स्क्रैपर:
यदि तपाईंको प्राथमिक वेब ब्राउजरको रूपमा Google Chrome छ भने तपाईले वेब स्क्रैपको लागि अप्ट गर्नुपर्छ। यो एक उत्कृष्ट क्र्रालिंग र खनन कार्यक्रम हो जुन तपाइँले तपाइँको व्यक्तिगत ब्लग र ब्यापारिक वेबसाइटहरूको लागि साइटमैपहरू सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ। तपाइँसँग केवल तपाइँको क्रोम ब्राउजरमा यो स्क्रैर डाउनलोड गर्न, स्थापना गर्न र थप गर्न र तपाइँको दिइएको वेबसाइटहरूबाट डेटा कसरी हटाउनेछ भनेर हेर्नुहोस्। तपाईं साइटमैप आयात गर्न सक्नुहुनेछ वा तपाईको वेबसाइटको समग्र प्रदर्शन र प्रदर्शनका लागि यसको टेम्पलेटहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसले तपाईंको निकालेको डाटा CSV फाइलहरूमा वा यसको अभिलेख फोल्डरमा बचत गर्दछ।